Ubuchopho bomuntu yakhelwe ukuze ifuna ukuze athole incazelo enengqondo nganoma yisiphi isenzakalo, kwenzekani esizungezile. Kodwa lapho incazelo enjalo nhlobo, wonke umuntu uqala ukucabanga mayelana "non-randomness wenhlanhla." Ngokwesibonelo, abantu abaningi babuka iwashi, bheka amagugu ezibangela kubo ukukhathazeka. Lokhu kungaba noma inombolo efanayo esibukweni yabo isithombe. Ngakolunye uhlangothi, ukuqondana izinombolo akusona isimanga, kodwa kuyinto xaxa enganakile yethu ngaphezu kwesikhathi ukubhula nje. Kusukela ezikhathini zasendulo, abantu zithi amahora amaningi ukubaluleka ezingaqondakali, futhi namanje kunenkolelo enganakile uzama ukudweba siyinake, dlulisa umlayezo obalulekile ukuze ixwayise ingozi.
Okungenani kanye empilweni wonke umuntu odlulayo kuwashi yakhe, wayekwazi ukubona umdlalo. Akubona bonke ziwulalelisise. Abanye bakholelwa ukuthi lezi zibonakaliso ukuletha inhlanhla, kuyilapho abanye ngokushesha saqala ukufuna incazelo yalokho akubona. Kodwa uma inani elifanayo iqala ukuba Isiqu umuntu, kusho into eyodwa - Amasosha ephakeme ozama ukudlulisela isigijimi esibalulekile, futhi kufanele sina ukuba simthathe.
Umuntu ngamunye zenzakalo ezinjalo zingahlanganiswa yini uyaqaphela ufake wabayisa kohlaka wakhe umbono abanawo emhlabeni wonke. Okwesikhathi esithile, ukubhula lihlotshaniswa kakhulu ngohlelo Psychology, abanye kuba kokungenela kwamandla ezingaqondakali futhi magic. Konke kuncike umuntu, imibono yakhe yokuphila. cwaningo Active zalesi simo bekulokhu isayensi ezifana ukubhula. Kikho koke ukuphila kwakhe umuntu ebhekene izibalo bahambe naye njalo. Abaningi abakuzuzile izinombolo basesemhlabeni kokuzwa abantu kusukela eminyakeni eminingi eyadlula, isibonelo, inani uSathane noma kweshumi wombhaki sika.
Kukholakala ukuthi abanye ukugqagqana izinombolo baphathe umqondo ezingaqondakali, awayona ngephutha. Ukubhula uye isikhathi eside ngifuna ukubaluleka kwamadijithi, futhi lokhu kusebenza futhi inhlanganisela yamanani yesikhathi. Nale isayensi singakwazi ukuthola ukuthi uzama ukusitshela isikhathi.
Inombolo "omunye" lihlotshaniswa amandla, ngakho ukuphindaphinda yayo njalo kungasho kutsi umuntfu utawulandzela okudingeka ukwenze self-ukuthuthukiswa, ukuze banake ubuntu bakho. Kodwa lokhu akulona ukubaluleka kuphela. Uma umuntu uzama ukufeza imiphumela ibhizinisi labo, iyunithi ukuphindaphinda ungakhuluma ngesidingo ziphelelwa kutati ukuthuthukisa isimo sabo maqondana abantu.
Inombolo "ezimbili" kusho ukuthembela nokuzinza lapho ithandana nothile nokuthi imizwa. Ngakho-ke, uma umuntu babhekana ngababili okuphindaphindiwe on iwashi, okusho ukuthi ubuntu bakhe kuyinto ngempela impikiswano. Kukhona kungenzeka ukuthi kungcono uhlangothi ukuze kube nokulingana ezinye zezici uhlamvu. Uma wenza lokhu, abantu bazokwazi kabanzi ngendlela enomqondo nibheka umhlaba, ngeke usaba senze izinqumo ezisekelwe imizwa iyadlula. Ngakho uma umuntu ebona isikhathi 21:21, kungase zisebenze iyunithi, futhi laba ababili, kuye ngokuthi iliphi ihora uyobona okulandelayo noma okunye ayebone ngaphambili.
Njengoba for kathathu, zingabantu ukuhlobana esidlule, zamanje nezesikhathi esizayo. Ngakho ukubhula isikhathi ibonisa ukuthi nesenzakalo kaningi kule nombolo nilindile ukutshela umuntu ukuthi sekuyisikhathi ukucabanga ngokungathí sina ngekusasa, mhlawumbe manje kunqunywa amathemba kanye namathuba ezilindele kuye esikhathini esizayo.
Ukusebenza kanzima kanye nempilo kubonakala ngamanani "ezine". Five ezihlobene yinjabulo futhi adventure, ukuze bakwazi ukuxwayisa ngezingozi. Ngomqondo onabile, Yilezi izibalo eziyisisekelo, okuyilona elisebenzayo kufanele sinake.
ukubonakaliswa Mystical izinombolo
Ukuze achaze lo mkhuba owenziwa njalo ukuphindaphinda ngesikhathi on iwashi, kusukela iphuzu eliwusizo umbono kuba cishe kungenakwenzeka. Ngokusho odokotela bengqondo eziningi, kungcono suspiciousness nje abantu noma emakamu anda noma kunjalo, ngenxa yalokho kwabangela i-newashi lomzimba ingqondo indoda ukumphazamisa. Kunoma ikuphi, 11:11 - isikhathi uye yabakhanga, kanye nezinye eziningi amagugu ezifanayo. Uma lokhu iye ngokuphindaphindiwe ukuqinisekisile umkhuba, kungenzeka ukuba intuitively sinake izithombe, kuhlanganise iwashi ukuxhumana enganakile. Phela, uzama ngakho kufanele sixwayise noma ukuvikela.
Okuvame kakhulu amanani isikhathi
Abantu abaningi sinake zeenomboro, abhanqiwe futhi walingisa. Ukubhula isikhathi iwashi angakutshela kakhulu, into esemqoka - nje ukuba banake isigijimi.
00:00 - phakathi kwamabili ngesikhathi bezilokhu kubhekwe lokukhohlisa. Phakathi nale nkathi, abantu begubha uNcibijane, kodwa kukholakala ukuthi isifiso, efihlekile ngalesi sikhathi, zizogcwaliseka. Futhi, ngokuvumelana ezinganekwaneni, kwaba ngalesi sikhathi kuboniswa bonke ububi. Nokho abanye bakholelwa ukuthi uma umuntu ngalesi sikhathi ukuba banake nemini, isifiso sakhe ubudala kufanele kugcwaliseke ngokushesha.
01:11 - kunenkolelo yokuthi uma umuntu wakuphawula lokhu isikhathi, khona-ke kufanele sisinakisisa zonke izipesheli wathola, kodwa bayoba. Cishe ukunikela ibhizinisi ezinengqondo ukuthi kuyoba inzuzo futhi okuthile okuhle empilweni.
11:11 - isixwayiso sikhathi, kusikisela ukuthi kungenzeka ube umlutha ngaphansi kwethonya omunye, umuntu namandla kakhulu noma kungenzeka wokuba umlutha okuthile. Ngakho-ke kuyadingeka ukuba banake ukuphila kamuva futhi ukuvimbela lo mcimbi, ngoba akunakwenzeka ukuba libe nethonya elihle kuwe.
21:21 Isikhathi uthi le ndoda haunted by izipoki yesikhathi esidlule ngokushesha kungase ukusingatha umhlangano omjwayele ubudala.
12:12 - kungenxa yempumelelo e ukuthandana. Uma umuntu ebheka iwashi ngalesi sikhathi, kusho ukuthi ekuphileni kwakhe kuyoba ezinhle ezithathiwe ubuhlobo. Uma ungenayo i-pair ke ngokushesha uyokuthola.
13:13 - isikhathi Uphinde abhekwe isexwayiso ezibalulekile. Dozen Baker lithi umuntu kufanele kube phezu uqaphile - othile kusuka nethimba lakhe noma izitha uhlose ukwenzani isinyathelo yakhe embi, futhi kuba usongo manje abasafufusa.
Positive ukubhula isikhathi 18:18 - injabulo, imimoya okusezingeni eliphezulu kuyoba umuntu esikhathini esizayo esiseduze.
22:22 - inhlanganisela inani ngazimbili ukhuluma amaziyo entsha, kwezinye ukutolika, ke kubonisani romance iholide esikhathini esizayo esiseduze.
00:07 - kungaba uphawu ebalulekile inhlangano ephethe hlola imidlalo isizathu ingqondo yakho esesimweni sokungaphili ngokuphelele ukubika ukubhekwa kanye nokuqapha.
1:23 - ukuze manje inkathi yoshintsho ekuphileni kwami, futhi kuba isikhathi ekubekeni isisekelo sokumiswa neyokuthola ikusasa elijabulisayo.
Zonke lezi zenzakalo okuthwala incazelo imfihlo, futhi kungenzeka nje ukuqondana kwezinto. Umeluleki main kule ndaba - the umuzwa, it uzokutshela yini noma cha ukuba banake lokhu noma kulowo mcimbi. Kunoma yikuphi, ngisho nokuncane owesincane enganakile uzokwenza isinqumo esihle, futhi has a nethonya elihle lokuphila kwesikhathi esizayo.
Ukubhula ngokufunda intende. Umugqa izingane wembula imfihlo enkulu umthamo wemvula omkhaya esikhathini esizayo
Ekubumbeni nge USindi Krouford: incazelo izinhlelo "Imfihlo sibalo okuphelele" nelithi "Indlela yokufinyelela ukuphelela?"
Ikamu Wezingane "Zorka" e Anapa: isithombe, ukubuyekezwa
Izicathulo: iphupho namaphupho
Meaning futhi imvelaphi phraseologism "nesihloko sosuku." Ukusetshenziswa abezindaba nezincwadi